Inkxaso eyingozi kumaxabiso emarike yestokhwe saseSpain | Ezezimali
Elinye lamaqhinga okufezekisa injongo yakho kutyalo-mali kwiimarike zengeniso ngokungathandabuzekiyo kukubeka esweni inkxaso abanayo kwezabo uhlalutyo lobugcisa. Kuba ukuba baphulwe, awuzukukhetha ngaphandle kokuvala izikhundla kwimarike yemasheya kwaye uzinikezele ekuvavanyeni enye indlela kwicandelo lotyalo-mali. Phakathi kwezinye izizathu, kuba ungashiya i-euro ezininzi endleleni ngokungafumani ezinye izixhaso ngokubaluleka okukhethekileyo kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Ukongeza, yinkqubo engayi kukuxabisa kakhulu ukuzama ukuyenza ukusukela ngoku.
Ngale ndlela, kukho uthotho lwamaxabiso ekufuneka uwaxabisile ngenkxaso yawo kuba ukuba ayigqityiwe, awusenaso esinye isisombululo ngaphandle vala imisebenzi ngokukhawuleza. Ukuze izinto zingabi mbi ukusuka kuloo mzuzu kuyingozi kwimidla yakho njengomtyali mali ophakathi nophakathi. Apho, ngako konke ukuqiniseka, kukho okungakumbi okufuneka uphulukane nako kunokufumana kwaye le meko kufuneka uyiphephe konke konke ukuba awufuni ukumangaliswa okungaqhelekanga kwipotifoliyo yakho yotyalo mali.
Ngelixa kwelinye icala, ezinye zeenkxaso zala maxabiso zisondele kakhulu kumaxabiso azo kwaye ngenxa yoko ingozi inkulu. Ngelixa kwezinye iimeko zichasene, oko kukuthi, kude kumaxabiso acatshuliweyo kwaye ngale ndlela imida yokuhamba kukhulu kakhulu kunezinye. Siza kukunika ukusukela ngoku uthotho lwamaxabiso apho kuya kufuneka uthathele ingqalelo inkxaso apho kuya kufuneka uyeke izikhundla thintela ukuvuza okungaphezulu kwemali kwimisebenzi eqhutywa kwiimarike zezabelo.
1 Inkxaso: I-4 euro kwi-Santander
2 Ukuphela kwe-euro ezingama-19
3 ISabadell kwiyunithi ye-euro
4 Ii-ACS kwii-euro ezingama-33
5 I-Ferrovial isenomda
Inkxaso: I-4 euro kwi-Santander
Umqobo okhoyo kwii-euro ezingama-4 isenzo sisigqibo sokuya kwi-uptrend ukuya kwi-bearish. Zombini ngokubhekisele kwi ixesha elifutshane nelide. Ayothusi into yokuba inqanaba elifanelekileyo kakhulu ukuze izikhundla ezimfutshane zongamele ngokucacileyo abathengi. Ukuba izabelo zeBanco Santander ziye zafikelela kula manqanaba, alithandabuzeki elokuba izikhundla kuya kufuneka zishiywe ngokukhawuleza. Ngenxa yokuba amaxabiso akho angaya ezantsi kuseto lwakho lwamaxabiso.
Ke ngoko, eli nqanaba lamaxabiso kufuneka libe kulo naliphi na iqhinga lotyalo-mali ukuze ungabinalo naluphi na uhlobo lwezimanga ukusukela ngoku. Kuba unokuphosa uninzi ngendlela ukuba awuyazi into eyenzekayo ngokuvela kwezabelo zeBanco Santander. Oko kukuthi, yi inqanaba ekufuneka ulibukele ukusukela ngoku ukukhusela umdla wakho kwicandelo lotyalo-mali. Ukuze uphuhlise ukuvela okuhle kwipotifoliyo yakho yotyalo-mali.
Ukuphela kwe-euro ezingama-19
Inkampani yombane ikwiimeko ezintle kwiimarike zezabelo. Ngokuchanekileyo kuba ikwindawo yokunyuka simahla apho ingasenakho ukumelana ngaphambili kwaye ke inokuhlangabezana neenjongo ezintsha kwixabiso lazo. Okwangoku akukho bungozi ekuthatheni izikhundla kweli xabiso, ukuba nje zidwelisiwe ngaphezulu kwe-euro ezingama-19 ngesabelo ngasinye. Eli linqanaba oya kuthi ulihloniphe ukuze uqhubeke nokunyuka kwangoku. Ukuba ngalo naliphi na ixesha eli xabiso liwa, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokuyeka izikhundla ngokukhawuleza.
Ngaphantsi kwe-euro ezingama-19 kuya kubakho uhambo olude olude ezantsi. Ubuncinci ukuvavanya i-euro ezingama-16 kunye nokuba kunokuthetha ntoni ukubonakala komgangatho ophantsi. Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba i-Endesa lukhuseleko olubekiwe kakhulu lixabiso eliphezulu elihlawulwe kubanini zabelo. Ngenzuzo esondeleyo kumanqanaba e-7% ngentlawulo esisigxina kunye neqinisekisiweyo minyaka le. Eli licandelo elinokuchaphazela ixabiso ukusukela ngoku. Ngokukodwa, ngaphambi kokuhla kwamaxabiso abo.
ISabadell kwiyunithi ye-euro
Ngokuchanekileyo iyunithi ye-euro eya kuthi ichonge i-ballista okanye imeko ephezulu yexabiso. Okwangoku, ixabiso layo lisondele kakhulu kula manqanaba kwaye ke kuyakufuneka ukuba unikele ingqalelo kakhulu kwinto enokwenzeka kwiiseshoni ezilandelayo zorhwebo. Ngale ndlela, akucaci ukuba yintoni enokwenzeka kwaye ngendlela ethile inokubangela ukungazinzi okuninzi kuseto lwamaxabiso akho. Ke ngoko, ulumkiso luya kuba sisinxibelelanisi esiqhelekileyo kwizenzo zakho kwiimarike zezabelo. Akumangalisi ukuba, ezantsi kweyunithi ye-euro inokuba nokuhla okufanelekileyo kakhulu kwaye kuzo zonke iimeko kuya kufuneka uphephe ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselwayo.
Ngelixa kwelinye icala, akunakwenzeka ukuba enye yeenjongo zakho ezilungileyo kukulungisa amaxabiso afunyanwa kuphela nditsho babheje ngazo. Bambalwa kodwa ngokuqinisekileyo ezinye ezinezi mpawu zinokufunyanwa ngokuchasene neemvakalelo zentengiso. Alithandabuzeki elokuba eli xabiso lebhanki alikabikho kule meko, kodwa nangawuphi na umzuzu imeko inokutshintsha kakhulu. Kungenxa yokuba ekupheleni kosuku sithetha ngeemarike zokulingana ezinokutshintsha imeko yazo nangaliphi na ixesha. Nangona oku kuyakunyanzeleka ukuba ube nexabiso elingaphezulu kwe-euro ezingama-1,65 ngesabelo ngasinye kwaye isekhona indlela ekusafuneka ihanjwe ngaphambi kokuba le meko intle yenzeke kwelinye leempawu kumgangatho weebhanki.
Ii-ACS kwii-euro ezingama-33
Inkampani yokwakha isekwimeko entle kakhulu ukuba iqhubeke nokuqhubeka kangangeenyanga ezininzi. Kungenxa yokuba inkxaso yayo ekubhekiswa kuyo ikude kakhulu kumaxabiso akhoyo. Ngokukodwa, zikwi Amanqanaba angama-33 okanye ama-34 euros ngesabelo ngasinye, apho umatrasi onawo phambi kwakho uphawuleka kakhulu ukuba ufuna ukubekwa kwelinye lamaxabiso asemgangathweni kulo nyaka uphelileyo. Ngophuhliso olucacileyo oluye lwakhokelela kurhwebo kumanqanaba ngaphezulu kwe-40 ye-euro ngesabelo ngasinye. Umngcipheko, ke ngoko, ungaphantsi kunezinye izindululo ezibonelelwa ngoku ziimarike zezabelo, kuzwelonke nangaphandle kwemida yethu.
Ukuthengiswa kweqela le-ACS kwikota yokuqala ye-2019 kwafikelela kwizigidi ezingama-9.263 zeerandi, ezimele ukwanda kwe-6,8% kunye ne-4,0% ilungelelaniselwe utshintsho kwizinga lotshintshiselwano. Iimarike zaseNyakatho Melika, e-Australia naseSpain ziyaqhubeka nokubonisa ukukhula okuqinileyo. Ngelixa kwelinye icala, kufuneka kugxininiswe ukuba ulwabiwo lwejografi lokuthengisa lubonisa ukwahluka okubanzi kweqela, apho iNyakatho Melika imele iipesenti ezingama-45 zentengiso, iYurophu ezingama-22%, iAustralia 19%, iAsia 6%, uMzantsi Merika 7% kunye Afrika i-1% eseleyo. Ukuthengisa eSpain kwenza i-17% yetotali iyonke.
Enye yeenkampani ezinkulu zokwakha zikazwelonke ezidweliswe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35 isenamanqanaba ayo kude nenkxaso ephambili. Kuba ngoku, zijikeleze i-18,50 ye-euro ngesabelo ngasinye, kunye nomda ekufuneka ubekwe njengowamkelekileyo okwangoku. Nangona ye- gcina ixabiso kwiinyanga ezizayo ukuba kunokwenzeka uye kula manqanaba kuseto lwamaxabiso. Kwimeko apho, ekuphela kwendlela eyahlukileyo iya kuba kukushiya izikhundla ngenxa yomngcipheko wokuwa ngakumbi kwiimarike zezabelo. Kwaye oko kuya kuba ngumgca wokwahlula phakathi kokuphuma kunye nokuhla. Oko ngokungathandabuzekiyo kuya kuthetha utshintsho olukhulu kakhulu kwimeko.
I-Ferrovial, iziseko zophuhliso kwihlabathi liphela kunye nomqhubi wokuhamba, uzuze isiphumo se-2019 yezigidi zeerandi kwikota yokuqala ye-98, xa kuthelekiswa ne -161 yezigidi zeerandi kunyaka ophelileyo, ngenxa yempembelelo yokubonelelwa kwezigidi ezingama-345 zeerandi ukugubungela okunokwenzeka ilahleko yezivumelwano ezithile zokwakha eUnited States. Inzuzo yenzala iya kuba kwi-114 yezigidi zeerandi, isaphulelo koku. I-RBE ime kwi-230 yezigidi zeerandi, eya kuthi, isuse eli lungiselelo, inyuke iye kwi-115 yezigidi zeerandi. Kukwaphenjelelwe lutshintsho kwiperimeter njengoko icandelo leenkonzo lihlelwa "njengelibanjelwe ukuthengiswa.
Yonke le mizekelo ibonisa ukubaluleka kokufika kwaba basasazi kwiinyanga ezizayo kuhlalutyo lobuchwephesha. Ngaphandle kokunye ukuthathelwa ingqalelo kobuchwephesha bendalo kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko. Ukufezekisa oko ukuhlangabezana neenjongo zakho Oko kukuthi unokuziphepha iimeko ezingafunekiyo kakhulu kwimidla yakho kwicandelo lotyalo-mali, oko kukuthi, emva kwayo yonke loo nto, yintoni ebandakanyekayo kolu hlobo lwezicwangciso zotyalo-mali ezikhethekileyo kwaye kwangaxeshanye zisebenza. I-RBE ime kwi-230 yezigidi zeerandi, eya kuthi, isuse eli lungiselelo, inyuke iye kwi-115 yezigidi zeerandi. Kukwaphenjelelwe lutshintsho kwiperimeter njengoko icandelo leenkonzo lihlelwa "njengelibanjelwe ukuthengiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Inkxaso eyingozi kumaxabiso emarike yaseSpain